Maxaad U Samayn Kartaa Jacayl Dartii? Qiso Aad U Xiiso Badan Oo Dhex-martay Amiiradda Boqortooyada Dalka Japan Iyo Wiil Dhallinyaro Ah.
(DLN-Japan)-Amiiradda boqortooyada Japan ee Mako ayaa ku dhawaaqday in ay is mehersanayaan nin dadka caadiga ah ka mid ah, waxayna diyaar u tahay in ay lumiso mansabkeeda boqortooyada.
Sharciga dalka Japan waxa uu qabaa in qof ka tirsan qoyska boqortooyada uusan guursan karin qof banaanka ka ah qoyska, haddii ay taasi dhacdana uu qofkaasi lumin doono ka mid ahaanshiyihiisa qoyska boqortooyada.
Tan waxa ay keenaysaa su’aasha ah illee intee in la’eg ayaan ayaan diyaar u nahay in aan jacayl dartiis u lumino waxyaabaha wanaagsan ee aan haysano, maxaanse jacayl dartiis u samayn karnaa?
Gabadha lagu magacaabo Anya waxa ay deyrisay qoyskeeda, waxana ay iska hilmaamtay wax kasta oo nolosha ku saabsanaa si ay isu guursadaan ninka lagu magacaabo Duncan oo ay ku kulmeen jaamacadda Glasgow.
Gabadhan qoyskeeda waa mid diinta aad ugu ad adag, mana doonaynin in gabadhooda ay guursato qof aysan iyaga u dooqin, waxayna ka xigeen dhimasho.
Sidaasi darteed Anya iyo Duncan xiriirkooda waxa uu ahaa mid ku salaysan qarsoodi. Anya waxa ay sheegtay in qoyskooda ay ka waysay wax xoriyad ah iyo madaxbanaani nolosheeda ah.
Markii dambe waxa ay go’aan ku gaartay in ay gurigooda isaga tagto si ay Duncan ula dhisato xiriir waara. Waxaa soo qabtay reerkeeda, kuwaas oo sida ay aaminsantahay siiyay dawo suuxisa.
Mar labaad ayay reerka ka baxsatay iyada oo garab ka helaysa macalinkeeda jaamacadda, waxayna tagtay dalka Netherlands.
“Duncan ayaa i weeydiiyay in aan ugu dhaarto in isaga dartiis aanan reerkeena u burburin haynin, waxaanse u sheegay in isaga kaliya uusan ahayn sababta aan reerka uga cararayo, balse reerka aan wax xoriyad ah ka waayay, sidaasi oo ay tahay uu isaga qeyb ka yahay sababta” ayay tiri Anya.
Billo kadib ayay kusoo laabatay Glasgow, waxayna isku dayday in ay reerkeeda la heshiiso kuwaas oo ka codsaday in ay kasoo qaybgasho arooska walaasheed oo ka dhacayay dalka Bangaladesh, halkaas oo markii ay tagtay guriga lagu xiray.
“Waxay iigu gooddin jireen in ay i dilayaan, iyaguna is dilayaan maadaamaa ay sheegeen in aan ceeb usoo jiiday” ayay tiri Anya oo markii dambe inta baxsatay magangalyo ahaan u gashay safaaradda UK ee Bangaladesh.
Dib dambe uguma aysan laabanin reerkooda, waxayna sanado kadib is guursadeen Duncan oo intaas ay jilayeen xiriir jacayl.
” Waxaan degnay meeshii ugu horaysay oo guri noo noqon kartay, 10 sanno ayaan ku noolnahay, waxaanan ku dhalnay saddex caruur ah” ayay tiri Anya.
Lahaanshaha sawirkaPNICHA KERDPHOLImage captionPNICHA IYO LEE
Gabadha kale ee lagu magacaabo Pnicha Kerphol waxa ay ku kortay magaalada Bangkok, waxayna kasoo jeedaa qoys ladan.
“Waxaan kusoo koray magaalada Bangkok, waxaan lahaa darawalo iyo jaariyado aniga i daryeela” ayay gabadhan u sheegtay BBCda , waxayna intaas ku dartay in nolosheeda ay ahayd mid raaxo ah.
Pnicha ayaa Bangkok ka tagtay sanadkii 2014-kii waxayna aaday London si ay shahaadada labaad uga diyaariso jaamacadda
Pnicha waxa ku biirtay jaamacadda University College London, halkaas oo ay kula kulantay nin lagu magacaabo Lee.
Pnicha waxa ay sheegtay in dadka ay aad ula yaabeen go’aankeeda ah in ay jacayl la wadaagto Lee, kana tagto nolosheedii heerka sare ahayd.
“Tani ma ahan sheeko ku saabsan gabadh kale oo qoys faqri ah kasoo jeedda oo guursatay nin taajir ah oo reer galbeed ah, qisadayda aad ayay oga duwantahay” ayay tiri gabadhan.
Aada ayay ugu faraxsantahay in ay go’aankeeda ku adkaysatay, meeshii uu qalbigeeda jeclaana ay raacday.
Gabadha lagu magacaabo Natasha Stubbs waxa ay ahayd jilaa ku nool magaalada New York, wax kastana caadi ayay iska ahaayeen illaa maalin ay fasax ku tagtay dalka Jamhuuriyadda Dominican, halkaas oo ay kula kulantay nin lagu magacaabo Fidias.
Fidias waxa uu ahaa nin muusigiiste ah, waxaana labadooda dhex maray jacayl iyo mustaqbal guur.
Balse maadaamaa meelo kala fog ay ku kala noolyihiin, midkood ayay ahayd in uu wax huro si ay hal meel ugu wada noolaadaan. Natasha iyo Fidias waa ay is guursadeen 6 bilood kadib.
Markii hore qorshaha waxa uu ahaa in Fidias uu u wareego New York, balse labo sano kadib kooxdii Fidias uu ka mid ahaa ayaa burburtay, wuxuuna ku qasbanaaday in uu ku biiro ganacsi ay reerkooda leeyihiin.
Lahaanshaha sawirkaDANIELA PAIEWONSKYImage captionNATASHA
Natasha ayay talo ku caddaatay, waxayna go’aansatay ay usoo wareegto jamhuuriyadda Dominican si ay ninkeeda isku meel ugu wada noolaadaan.
Kadib 16 sano oo ay is qabeen, islamarkaasna isu dhaleen saddex caruur ah, Natasha iyo Fidias waxa ay go’aan ku gaareen in ay is furaan kadib markii ay nolosha isku fahmi waayeen.
Hadda waxa ay ka fikiraysa in ay dib ugu laabato xirfadeedii hore ee jilleenka.